मैले ‘आई लभ यू’ आमा भन्न पाइन र भनिन् ! « Yoho Khabar
मेरो हातमा घडी छैन तर हरेक पल तपाईँले मेरो समय भनिदिनु भएको छ । बिहानीको किरणदेखि मध्यरातको निद्रामा पनि सपनी सजाउन आउनु हुन्छ । तपाईँलाई सपनीमा पाएर म कुर्सीमा विराजमान नेताभन्दा बढी खुशी हुने गर्छु, आमा !
आमा तपाईँको माया त मैले बुझेकै हुँ तर आफूले जति गर्नुपर्ने थियो त्यति गर्न सकेको थिइनँ । तर आज मायाको भण्डारमा लाएको साँचो फुटाएर पस्किँदैछु मेरी आमा । यो हावामा मैले आफ्नो आभास मिसाएर पठाएको छु । तपाईँले गन्ध महशुस गर्नु हुनेछ । प्रेम गन्ध जुन श्वास भएर तपाईँको नसामा रगतका कण हुँदै हृदयमा पुग्नेछ । मलाई विश्वास छ आमा, मेरो प्रेमलाई तपाईँले झुठो महसुस गर्नु हुनेछैन ।
जब वर्षात् सुरु हुन्छ मलाई तपाईँको धेरै याद आउँछ अनि आँखाबाट आँसु झरेको थाहा हुन्न आमा । आज घुम्दै थिएँ, कामको खोजीमा । तर जताजता पुग्थेँ, तपाईँलाई नै भेट्टाउँथे आमा । टाढा हुन त किन दिनुहुन्थ्यो र मलाई ! तपाईँले सपनीमा ‘बिरामी छस् हो छोरा?’ भन्दा आमा म खुब रोएँ । हो, आमा चार दिन भइसकेछ आज शरीरले अस्वस्थ महशुस गरेको तपाईँको यादमा । यो कुरा सुनाएर तपाईँको पिर चिन्ता बढाउन नसेकेरै भन्ने आँट गरिनँ आमा !
तपाईँ मलाई यति धेरै माया गर्नुहुन्छ, आशीर्वाद दिनुहुन्छ, त्यही भएर आजसम्म हार्न सकेको छैन आमा मैले । तपाईँलाई कहिल्यै मैले ‘आई लभ यू’ आमा भन्न पाइनँ र भनिनँ । तर मेरो मायाको सागर कहिल्यै कम भएको छैन आमा ।